Izany no mitranga rehefa mianjera amin'ny tany ny iPad Vaovao | Vaovao IPhone
Izany no mitranga rehefa mianjera amin'ny tany ny iPad Vaovao
Tsy voatery niandry ela vao hahita famakafakana video an'ny inona no mitranga rehefa mandatsaka ny iPad vaovao amin'ny tany isika. Amin'ity tranga ity, ny ekipa manao ny horonantsary dia mampiseho izay manjo ny iPad 2 sy ny iPad vaovao rehefa mianjera amin'ny tany izy ireo amin'ny lafiny maro. Ny tena tanjon'ity horonantsary fampitahana ity dia ny manamarina ny fanoherana ny efijery retina manoloana ny efijery an'ny iPad 2.
Ny valiny, araka ny hitanao amin'ny horonantsary, dia mahafaty amin'ny ankamaroan'ny rano mitete, mipoitra ny efijery amin'ny tranga roa. Ataovy ao an-tsaina fa ny iPad 2 dia somary maivana kokoa noho ny taranaka vaovao (50 grama eo ho eo ambany). Toa mizaka fahasimbana bebe kokoa ny taranaka iPad vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Izany no mitranga rehefa mianjera amin'ny tany ny iPad Vaovao
Juankys dia hoy izy:
Mianiana aho fa alohan'ny anaovako ireo zavatra ireo (any ianao afaka mahazo $ 2000 mora foana) dia omeko ho an'ny ONG rehetra izany.
Valiny tamin'i Juankys
Miguel Couce dia hoy izy:
Ny marina dia raha latsaka avy amin'ny efijery ny iPhone na iPad dia potika ara-bakiteny ny fikorohany. Mila milaza aho fa tao amin'ny ApleStore dia nanova Ipad 0 miaraka amin'ny efijery vaky ho an'ny iray vaovao (nohavaozina) ny € 2 (parakeet maimaim-poana). TSY MISY ORINASA MISY IZANY.
Ny zavatra niainako voaporofo tamin'ny henaniko dia milaza fa ny Iphone3G sy Ipad2, dia tsy mahatanty izany fianjerana izany.
Tsy maintsy milaza ihany koa aho fa ny Samsung Galaxy S sy ny Samsung Galaxy Note-ko dia nandatsaka ny écran imbetsaka ary mbola eo, manome gadona. Ny ady amin'ny henjana dia azon'i Samsung, eny, ny antsipirian'ny Apple momba ny famahana olana iray naterako. (tonga tamiko izany ary tsy izy ireo no tokony homena tsiny) dia ny manala ny satrony.
Valiny tamin'i Miguel Couce
Lajara08 dia hoy izy:
Ahoana no ahafahanao mandefa soso-kevitra amin'ny paoma mba ahafahana manao lahatahiry amin'ny rindranasa ibooks?
Tsy misy lahatahiry fa misy kosa ny fanangonana izay manangona anao ary tsy mampiseho afa-tsy ny boky, magazina sns tianao
Valiny amin'i Demian
Gehnna dia hoy izy:
Ny tena tanjon'ity horonantsary fampitahana ity dia ny manamarina ny fanoherana ny efijery retina mikasika ny efijery iPad 2. Noooooo, ny tena tanjon'izy ireo dia ny fomba mety hahatonga ny olona ho dondrona be rehefa mamaly ipad 2 manao chorra. Jereo fa misy olona adala
Mamaly an'i Gehnna
hey dadatoa dia hoy izy:
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho Gehnna, antenaina izy ireo ... fa hitsambikina na zavatra toa izany ... na vera gorila aza no anaovan'izy ireo, dia mazava ho azy ny valiny. Ary mety ho be dia be ny olona izay afaka nampiasa tsara ireo iPad roa ireo. Na ny IPad na ny iPhone 4 / 4S samy manana sisin-tany kely manify izay manarona ny sisin'ny vera saingy tsy afaka mamonjy azy ireo izy ireo, raha atsipinao amin'ny tany amin'ny fomba izy ireo dia mandresy.
Valio hoy dadatoa
Malizziosso dia hoy izy:
Manana fiantohana fihenam-bidy aho ary te hanangona azy alohan'ny hahatongavan'ny fotoana. Azoko atao ny milaza fa ninia nanandrana nanaparitaka ny efijery iPad 1 nataoko aho ary sarotra dia mafy ny mifanohitra amin'ny gorodona vita amin'ny gorodona, ny arofanina vita amin'ny hazo na koa ny mikapoka azy amin'ny sisin'ny varavarana Raha tsy vato, beton na zavatra mafy sy mafy TSY MISY MORA NY gorodona.
Manohitra ny karipetra, ny parety na ny tohatra hazo, tsy fanahy iniana.
Valiny tamin'i Malizziosso
Hadalana inona hoy ianao. Fa maninona no tadiavinao ny iPad misy faritra soloina izay nesorin'izy ireo tamin'ny iPad hafa izay misy lesoka? Satria hoy aho .. Fantatro fa fantatrao fa rehefa manolo fitaovana na ampahany ianao dia-nohavaozina-.
Jose brito dia hoy izy:
Salama tsara, ny iPad natsofoko ary tsy fantatro raha sendra sendra azy ireo izy ireo na inona, saingy tsy misambotra ahy ny Internet ary milaza fa mifamatotra izany ary ny zavatra rehetra, tsy azoko novonoina akory, nisy olona afaka nanampy ahy miaraka amin'ity, misaotra
Mamaly an'i Jose brito
Tranga misy fikitihan'ny tanora ho an'ny iPhone
Tangram Smart Dot: pointer laser ary stylus amin'ny vokatra iray